PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ကေအိုင်အေ နှင့် တပ်မတော်တို့ လေးရက်မြောက်တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ပြင်းထန်
ဘင်္ဂလား မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ရက္ခိုင့် တပ်မတော်နှင့် မြ...
မနက်ဖြန် ရန်ကုန် ၊မန်းလေး ( ၁၀:၁၀ ) လူထုလှုပ်ရှားမှု...
ကောင်းဝိုင်းရွာအနီး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကော...
စိတ်မကောင်းစရာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို မကာကွယ်နိုင်...
မြန်မာ နိုင်ငံသားများ အဓမ္မ စေခိုင်း နှိပ်စက်ခံနေရ
ကေအိုင်အေ နှင့် တပ်မတော်တို့ လေးရက်မြောက်တိုက်ပွဲ ...
KIA တပ်မဟာ(၃) ကိုင်ထိပ် နောက်ဆုံးရ သတင်း
KIA တပ်မဟာ(၃)တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ် ၊ အစိုးရ...
တအာင်းဒေသ တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ပြင်းထန်
၂၀ရက်နေ့ ကိုးကန့်တပ် အားကျဲချသော မြန်မာလေတပ်၏ ဗုံး...
ကျွန်တော်တို့ကို နေစရာပေးပါ .....
ဖုန်ကြားရှင်၏ ကိုးကန့်တပ်နှင့် အစိုးရ တပ်မတော် တို...
ကိုး ကန့် တိုက် ပွဲ မှာ အ ကျ အ ဆုံး များ နေ တဲ့ တပ...
ယနေ. ဆွေးနွေးပွဲမှာ NCCT ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာရဲ့ ...
TNLA တအာင်းတပ်မတော်မှ သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းငါးထော...
တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တစ်ရက်အတွင...
မြန်မာ့ လေတပ်မှ ပစ်ခတ်၍ တရုတ် နိုင်ငံသားများ သေဆုံ...
ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွတ်နေတဲ့ အစိုးရ ....
လက်ပံတန်း အကြမ်းဖက်မှု မှတ်တန်း အပြည့်အစုံ
မြန်မာပြည်မှ စစ်အစိုးရနောက်လိုက် ယူနီဖေါင်းဝတ် အကြ...
စစ်အစိုးရ လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှုတွေ ကမ္ဘာသိအောင် ဝိုင်း...
အားလုံး သွေးစည်းကြရမယ့်နေ့(၁၀.၃.၂၀၁၅ မနက် ၁၀ နာရီ)
ချီတက်လှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ လေးစား...
သမ္မတ၊ ကာချုပ်တို့နှင့် KIO၊ TNLA,တို့ ပထမအကြိမ် တေ...
ပြည်သူတွေရဲ. ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံစားကြရလေသော အခါ သူတု...
''ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖမ်းဆီးနေမှု စိုးရိမ...
မြန်မာလူငယ်တွေကို Obama ချီးကျူး
တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ငွေပေးလူငှါးပီး လုပ်တာြ...
ရဲနဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေက လူမဆန်စွာ ဝိုင်းရိုက်တဲ့မြင...
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံးကွာကျသွားပြီ။
ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့၌ မတ်လ ၃ ရက်နေ့နံနက် ၁၁း...
အမေရိကန်သံ တောင်ကိုရီးယားမှာ တိုက်ခိုက်ခံရ
စွမ်းအားရှင်တချို့က ကျောင်းသားယောင်ဆောင်ပြီး ခဲနဲ့...
ကျောင်းသားနဲ့ ရဲတုို့ လက်ရှိ အနေအထားအတုိုင်း ဆက်နေ...
လက်ပံတန်းမြို့ အောင်မြေဗိမာန်ကျောင်းတိုက်အနီးမှာ ...
သပိတ်မှောက်ရဲဘော်များနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းများ တသား...
၈ ချက် တောင်းဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာချီတက်ပြီး
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လက်ပံတန်းမြို့ရှိ ပင်မကျောင်းသားသ...
FUA အတွက် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံ....
ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲ အခြေအနေ
ကေအိုင်အေ နှင့် တပ်မတော်တို့ လေးရက်မြောက်တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ပြင်းထန်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၂၇ နယ်မြေ မန်စီမြို့နယ် မဒန်ယန်နှင့် မထက်ဒူး ခိုကျေးရွာ နှစ်နေရာတွင် မတ်လ ၂၄ရက်ကလည်း တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ပြင်းထန်နေသည်ဟု ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၂၇ က တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။
“ဒီနေ့လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။ အခု မဒန်ယန်မှာလည်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒူးခိုမှာလည်း ဖြစ်နေတယ်။ နှစ်နေရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမနက် ၇ နာရီကနေ စတာ။ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း ပစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှိနေတဲ့ နေရာဘက်ကို သူတို့ တက်လာလို့ တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာ”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မတ်လ ၂၁ ရက်မှစတင်၍ အစိုးရ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ မတ်လ ၂၄ရက်တွင် လေးရက်မြောက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ မတ်လ ၂၄ရက်က တိုက်ပွဲအတွင်း KIA ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု မရှိဘဲ အစိုးရဘက်မှ နှစ်ဦး ကျဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။
မတ်လ ၂၂ ရက်တွင်မူ အစိုးရဘက်မှ လေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလို၊ ၂၃ရက်တွင်လည်း နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီထိ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃၆ တပ်များနှင့် အစိုးရ၏ တပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တို့ နေ့စဉ် ဆိုသလို တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Written by ဖနိဒါ (မဇ္ဈိမ)
Posted by PNSjapan at 1:11 AM